Inhloko ZeNdaba Zibandlela 29, 2021
Zibandlela 29, 2021
Uhulumende seqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19. Uhlelo lolu belumele luphele ekupheleni kwalinyanga kodwa umphathintambo wezempilakahle uMnu Constantino Chiwenga wazise namuhla ukuthi bakubone kufanele ukuthi ilizwe liqhubeke livaliwe kuze kuyefika mhlaka 15 ngenyanga ezayo ukuze kwehliswe ingozi yalumkhuhlane.
Kulabantu abangamakhulu edlula amathathu-342, abahlolwe batholakala beleCovid 19, eZimbabwe izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebetholakale bele gcikwane leli kusukela lahlasela elizweni kwabazinkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lambili- 32,646.
Inhlanganiso ezimelana lokumemetheka kweCovid 19 eMaNdebeleni sebechaze ukuba sebefike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukuthatha izigulane zeCovid-19 lapho umqondisi weI Am for Bulawayo fighting COVID-19 uchaze ukuba sebeqalile ukulungiselela ukwakha eminye imiduli ezenza kubelula ukuhlalisa izigulane zeCovid-19 ngoba iEkusileni Hospital sasakhelwe ukugcina abantu abagula eminye imikhuhkane hatshi iCovid-19.
Ezinye izakhamizi zePlumtree ku Ward 8 eBulilima zidinga usizo ngemva kokudilikelwa yizindlu kulandela ukuna kwezulu lesiphepho kulindawo kunsukwana ezedluleyo.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo uVusa Mangena odume ngokuthi ngu Vee Music ecula ekoBulawayo.
Ku Livetalk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa beleCovid 19 eZimbabwe osokubangele ukuqeliswa kwesikhathi seLock ngamanye amaviki amabili.